Dambudziko Rakajairika | Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.
MATAMBUDZIKO ANOGARA NEZVINOGONESESA ZVIDZIDZO ZVOKUDZIDZA
Chero mhando yechigadzirwa ichaonekwa mukati meichi kana iro dambudziko, dambudziko harityise, kiyi ndiyo nzira kwayo yekugadzirisa dambudziko.
1. Nekuti iyo huwandu hwemvura hwakashata, iyo tembiricha yemvura yakakwira kana yakaderera, kukweva kwedhiraina, nezvimwe, zvinofanirwa kutora nzira dzakakodzera dzekurapa zvinoenderana nezvinetso zvakasiyana.
2. Iringi yekuchembera kuchembera, kudonha kana kutyoka. Izvi zvinoda kunyatsoongorora usati washandisa uye nekumisikidza panguva yakakodzera iyo yekuisa chisimbiso. Kamwe zororo parinoitika, anoshanda anofanira kuenderera mberi nekukurumidza kana kuitsiva pasi pechirevo chekuona tembiricha yakachengeteka uye kumanikidzwa.
3. Kungoerekana kudzima kwemagetsi kana kudzima kwegesi Kana uchinge wasangana nemamiriro ezvinhu akadai, nyatsocherechedza mashandiro ehutori, nyora, uye pedzisa iyo sterilization kana kupora kwawanikwa. Kana iko kupihwa kukamiswa kwenguva yakareba, unofanirwa kutora zvigadzirwa muchirevo uye wozvichengeta, uye woenderera mberi nekushanda uchimirira kupora kwekuwaniswa.